म्याग्दीका बाढीपहिरो पीडितलाई साढे ३४ लाख सहयोग – Sulsule
सुलसुले २०७७ भदौ २६ गते १३:१४ मा प्रकाशित
गलेश्वर, भदौ २६
म्याग्दीका बाढीपहिरो पीडितलाई अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बसोबास गर्ने म्याग्देलीले करिब रु. साढे ३४ लाख सहयोग गरेका छन् । म्याग्दी समाज न्यूयोर्क अमेरिकाले त्यहाँ रहेका म्याग्देलीबाट सहयोग सङ्कलन गरी जिल्लाभरका बाढीपहिरो पीडितलाई रु. ३४ लाख ४५ हजार सहयोग प्रदान गरेको हो ।
स्थानीय तह र प्रहरीले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा समाजले धवलागिरीमा मृतकका परिवार, घाइते र चार जना सुत्केरीलाई रु. २ लाख ८० हजार तथा पूर्णरुपमा क्षति भएका ४४ घरपरिवारलाई रु. ११ लाख सहयोग गरेको छ ।
त्यस्तै मालिका गाउँपालिकामा मृतकका परिवार र घाइतेलाई रु. ७० हजार तथा पूर्णरुपमा क्षति भएका ५३ घरधुरीलाई रु. १३ लाख २५ हजार, मङ्गला गाउँपालिकामा १५ घरधुरीलाई रु. ३ लाख ७५ हजार, रघुगङ्गा गाउँपालिकामा मृतकका ३ जना परिवारलाई रु. ३० हजार तथा उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका दुई जना मृतकका परिवार र एक जना घाइतेलाई रु. ३० हजार एंव पूर्ण क्षति भई विस्थापित भएका १९ परिवारलाई रु. दुई लाख ३५ हजार सहयोग गरिएको म्याग्दी समाज न्यूयोर्कका प्रतिनिधि पूर्णबहादुर पुनले राससलाई बताए ।
पूर्णरुपमा विस्थापित भएका प्रतिघरधुरीलाई रु. २५ हजार, प्रतिमृतक परिवारलाई रु. १० हजार, प्रतिघाइते व्यक्तिलाई रु. १० हजार र प्रति सुत्केरी महिलालाई रु. १० हजारको दरले सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै एकै परिवारमा दुई जनाले ज्यान गुमाएकालाई रु. १५ हजार, तीन जनालाई रु. २० हजार र चार जनालाई रु. २५ हजार नगद सहयोग गरिएको बताइएको छ । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।